Mpanamboatra sinoa tsara indrindra epoxy manokana apetaho QR tag / ID pet pet / pet identité pet Manufacturer and Factory | Hobrin
Mpanamboatra sinoa tsara tarehy epoxy overlay QR tag / ID pet pet / pet identité pet
● Fanodinana: Fanontam-pirinty / fametahana / fanodinkodinana / fanontana 4-loko
● Fitaovana fototra: varahina / vy tsy misy fangarony / firaka zinc / PVC tsy misy rano na PET (fanoherana simika sy fanoherana ny hafanana) na taratasy, résin epoxy, sns.
Ny orinasan-tsoratry ny fanomezana Hobrin dia nandray anjara tamin'ny fanaingoana ireo biby fiompy biby fiompy hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 2012. Ny tag ID Pet sy ny kaody QR code an'ny biby dia iray amin'izany. Nataonay hanamorana ny biby fiompy very ny mahita ny tompony. Ny fitiavantsika ny biby sy ny biby no nanentana anay hanao an'io .. Raha mitady tag famantarana biby tsara kalitao ianao dia tonga amin'ny toerana mety. Ny tenifototra ID anay sy ny tag QR dia vita amin'ny fitaovana avo lenta ary misy karazany, habe ary fomba maro karazana.
Manome endrika anatiny bebe kokoa izahay, amin'ny alàlan'ny marika ID namboarina, tagan'ny kaody QR, tag NFC, ho an'ny marika ara-barotra, indostrialy na biby. Niely nanerana ny tsena manerantany ny mari-pamantaranay. Afaka manome toky izahay fa tsy manam-paharoa ny mari-pamantarana biby fiompy namboarinao, ary manatsara ny fizotran'ny famokarana isan-taona izahay mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa. Nandritra ny taona maro dia namokatra labozia namboarina an'arivony izahay ho an'ireo orinasa very sy hita malaza eran'izao tontolo izao, maso ivoho mpiaro ny biby ary orinasa mpamokatra fanafody toy ny mysafety.PetHUB, qtago, returnme.getmehome, sns.
Ny mari-pamantarana antsika rehetra dia vita amin'ny alim-by vita amin'ny metaly sy PET avo lenta. Ny dingana voalohany: ny substrate mifono dia fotsy, ny dingana faharoa: ny fampiasana ny teknolojia fanontana 4-loko hanaovana fampisehoana tonga lafatra ny volanao. Ny dingana fahatelo: tapaho ny vokatra arakaraka ny endrika natao. Dingana 4: asio resin epoxy amin'ny vokatra hardware. Dingana 5: Ampiasao ny laser mandroso indrindra hanoratanao ireo kaody ID sy kaody QR ilain'ny mpanjifa, noho izany dia mampanantena izahay fa ny substrates sy ny inks ary ny resin epoxy dia mifanentana amin'ny tontolo iainana, ary ny resin epoxy dia afaka mahazo fiarovana UV. ny detection drop aorian'ny nihenan'ny hatsiaka 5 degre nandritra ny 48 ora, ary ny fahazavan'ny code ID laser anay sy ny kaody QR dia afaka mamakivaky ilay fitaovana fitiliana. Raha matetika iharan'ny rano na any amin'ny toerana mando ny biby fiompinao dia mamporisika anao ihany koa ianao mba hanaingoanao ny mari-pamantarana landy vy ho azy.
Ny atiny momba ny biby fiompy rehetra dia azo namboarina ho sokitra. Aza manandrana manampy toerana, naoty ilaina, na tandindona mahafinaritra. Izany dia mahatonga ny pirinty ho kely kokoa sy sarotra fantarina. Izahay dia manan-jo hanova ny firafitry ny soratra amin'ny marikao mba hahazoana antoka fa mifanaraka tsara izy io.
Ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny Hobrin dia manana traikefa 9 taona amin'ny fanaovana marika famantarana biby. Manana fitaovana matihanina sy mpiasa teknika matihanina izahay. Iray amin'ireo mpanamboatra vitsivitsy any Shina afaka mamokatra tsy miankina isika. Raha mila izany ianao dia mifandraisa aminay.
Hobrin Badge sy ny orinasa Gift dia nanomana manokana ny kaody ID, kaody QR, karatra NFC FRID ho an'ny biby fiompinao
Ity dia fomba ara-toekarena hampitomboana ny fiarovana sy hikarakarana tsara ny biby fiompinao!
Kaody QR-Scan ny kaody QR hahazoana anao haingana kokoa.
URL-Ampidiro ny URL amin'ny browser rehetra raha hijery ny pejin-tranonkalanao.
Nampiasaina tamin'ny fanarahana fananana very na famonjena RFID vahaolana ho an'ny olona, ​​biby fiompy, kitapo, sns., Miaraka amina chip NFC Ntag213 namboarina. Manonta kaody QR tokana sy laharana serial. Ny url dia voahodidin'ny chip NFC. Ny url code QR dia mitovy amin'ny chip url. Ny olona manana telefaona NFC dia afaka mamaky ny NFC. Manokatra tranonkala ilay puce raha te hahazo vaovao momba ny famonjena na fampahalalana momba ny fifandraisana / tompony, ary ireo izay tsy manana telefaona NFC dia afaka manala ny kaody QR hanokatra ny tranokala.
Safidy fonosana vokatra
Manolotra karazana fonosana maro samihafa izahay. Ohatra, kitapo plastika tsotra, baoritra misy sarony milentika, azo namboarina hanontana ny mombamomba anao. Ho fanampin'izay, izahay koa dia manome fonosana namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takinao. Mifandraisa amin'ny mpamatsy ↓ mifanaraka amin'ny zavatra takinao, ny varotra anay dia hanome anao vahaolana matihanina.
Teo aloha: Mpanamboatra sinoa collar identifié RFID tag QR code NFC alika biby fiompy alika RFID
Manaraka: Mpanamboatra sinoa kalitao avo lenta namboarina fanontana CMYK fanontana fanontana manokana epoxy resin badge
Vola famaritana biby mpamokatra sinoa ...